Daawo: Xasan Sheekh oo dowladda Farmaajo ku dhaliilay in aysan waxbo ka qaban dacwadda badda afar sano ah | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Daawo: Xasan Sheekh oo dowladda Farmaajo ku dhaliilay in aysan waxbo ka...
Daawo: Xasan Sheekh oo dowladda Farmaajo ku dhaliilay in aysan waxbo ka qaban dacwadda badda afar sano ah
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay go’aankii ka soo baxay maxkamadda caddaaladda caalamiga ah ee magaceeda lo soo gaabiyo ICJ ay dib ugu dhigtay kiiska dacwadda badda ee u dhaxeysay Soomaaliya iyo Kenya.
Xasan Sheekh Maxamuud oo 2014 maxkamaddaan u gudbiyey dacwadan waqtigii uu ahaa madaxweynaha ayaa ku dhaliilay dowladda uu hoggaamiyo madaxeyne Maxamed Cabbullaahi Farmaajo in aysan wax lataaban karo muddo afar sano ah ka qaban.
Xasan Sheekh ayaa sheegay inay dacwada badda ay tahay mas’uuliyad madaxweyne oo aysan aheyn howl u taal wasiir iyo raysal wasaare kuxigeen.
“Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ka hadlaya ayaa maqlayaa, dacwadan ra’iisul wasaare kuxigeen ma lahan, wasiir ma lahan, madaxweynaha leh, warqad madaxweyne ayaa lagu geeyay dacwada, dadka wakiilka ka ah warqad madaxweyne ayaa lagu magacaabay. Waxaa rajeynayaa oo niyad samida ku jirtay, waxay aheyd madaxweynaha inuu dadka hor-yimaado oo dadka u sheego waxa jira” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Maxkamadda Adduunka ayaa aqbashay markii seddexaad codsi dib u dhigis ah oo uga yimid dowladda Kenya.